China 7 inch okpukpu abụọ ahịrị ahịrị diamond egweri iko wiil maka nrụpụta na ụlọ ihe n'igwe | Bontai
7 inch okpukpu abụọ ahịrị ahịrị diamond egweri iko maka igwe igwe
7 inch Double Row Diamond Grinding Cup Wheels na-eji na-egweri ụdị ọ bụla nke konkiri, marble, concrete ala.Ọ nwere ike dabara na aka-ejide angle grinders na ala-egweri igwe.iche metal agbụ nwere ike dị iche iche dị iche iche n'ala.Specific nkwado maka eke na mma mmịpụta uzuzu.
Akụkụ: Dayameta 4", 5" , 7"
Ngwa: Dabara na nkuku grinders ma ọ bụ n'ala grinders ka egweri ụdị nile nke sink ala.
7 Inch okpukpu abụọ ahịrị diamond egweri iko
4 ", 5" , 7" (Ndị ọzọ nha nwere ike ahaziri)
Maka ịkwanye ụdị ihe ọ bụla, terrazzo, granite na ala mabụ
1. Nkọwa zuru oke ma dị iche iche. Na ụdị dị iche iche na nha na-egbo ọtụtụ ndị ahịa mkpa.
2. Ezi itule na-ekwe nkwa magburu onwe egweri mmetụta.
3. Adịla akara nkume ma gbaa elu nkume ahụ ọkụ.
4. Ezi itule na-ekwe nkwa magburu onwe egweri mmetụta.
5. Ogologo ndụ ogologo na arụmọrụ kwụsiri ike.
6. Ọnụ ahịa asọmpi na mma dị elu.
7. Ịrụ ọrụ dị elu.
Ngwaahịa a dị mma maka igwe ihe siri ike nke ihe na ihe masonry. Nhazi nke ahịrị okpukpu abụọ maka iwepụ ihe dị arọ nke ọma karịa otu wiil n'ahịrị, ogologo ndụ ọrụ, nkwụsi ike dị elu, iwepụ ihe ngwa ngwa ma na-arụpụta ihe.
Igwe igwe na-egweri diamond a nwere nnukwu mgbanaka diamond, ogologo oge ọrụ, mwepụ ihe ike, yana ngwa ngwa na masonry, okwute na kọmpat! Ịcha ihe. Nhazi nke porosity na-enyere aka ịnọgide na-adị jụụ ma mee ka usoro ịkpụcha ahụ dị jụụ ma na-ebelata iyi, na-eme ka ọkpụkpụ diamond na-agbanwe agbanwe.
Nke gara aga: Wheel 5 inch okpukpu abụọ ahịrị diamond egweri iko
Osote: 4 inch Abrasive Tools Diamond Turbo Cup Wheel maka Concrete & Nkume
A na-eme wiilị iko diamond ka a ga-eji gweri kọnkịrị nkụ na ihe ndị ọzọ na-akpụ akpụ iji mee ka ebe dị larịị na-adịghị mma ma wepụ ihe na-egbuke egbuke. Matriks diamond na-enye ndụ 350x nke abrasives a na-emekarị ma na-enye ohere maka iwepụ ihe ike karịa. Ahịrị okpukpu abụọ nke diamond rim na agụba ndị a na-enye iwepụ ihe dị arọ ma na-enye ogologo ndụ.
4 inch egweri Wheel
7 inch diamond egweri Wheel
Disiki na-egweri abrasive
Onye na-egweri akụkụ
Onye na-emepụta China Stone Diamond Grinding Cup Wheel maka Egwe Ala
Ịcha diski egweri Wheel
Discs na-egweri diamond abrasive
Wheel mgbachi diamond
Igwe ihe eji egweri diamond
Egwuregwu iko diamond maka ichicha granite
Ihe nrịbama iko Diamond Cup-egweri Wheel
Diski ịkpụ diamond
Wheel ịkpụ diamond
Diski na-egweri ala diamond
Disiki na-egweri ala diamond
Diski na-egweri diamond maka ihe
Discs na-egweri diamond
Ngwá ọrụ egweri diamond
Wheel egweri diamond maka nkume
Wheel na-acha odo odo okirikiri maka Granite
Egwuregwu Diamond Turbo Cup
Ụkwụ na-egweri diski okpukpu abụọ
Ụkwụ okpukpu abụọ
okpukpu abụọ n'ahịrị iko wiil
Wheel diamond dị n'ahịrị okpukpu abụọ karịa arụmọrụ
akụkụ abụọ ahịrị
Wheel igwe ihe n'ala
Disiki na-egweri ala
Ngwa egweri maka ihe siri ike
Disiki na-egweri & polishing
Wheel na-egbuke egbuke
Akụkụ mgbanaka Diamond Cup
Ụkwụ egweri ekwo ekwo
Ụkwụ na-egweri Tubo Ahịrị
Turbo Cup egweri Wheel
Turbo Diamond egweri Wheel
7 ″ 6 Nkeji TGP Diamond egweri wheel ...
Wheel L Shape Abrasive Diamond egweri iko wiil maka...
7 inch abụọ ahiri diamond cup egweri wheel fo ...
7 inch Turbo Akụkụ Diamond Cup Wheel maka Conc ...